FILOHA ANDRY RAJOELINA : Maika ny famadihana ireo vina ho asa azo tsapain-tanana
Nampahatsiahivin’ny Filoha Andry Rajoelina tamin’ireo mpikamban’ny governemanta fa takiana vokatra haingana eo amin’ny fampandrosoana ny firenena izy ireo. Nambarany fa apetraka lo laharam-pahamehana ny famadihana an’ireo vina napetrany ho lasa azo tsapain-tanana hisitrahan’ny vahoaka. 23 août 2019
Nisy ny taratasy nataon’ny filoham-pirenena izay nambarany tao anatin’ny filan-kevitry ny minisitra, ny alarobia lasa teo. Taratasy miompana amin’ny fampahatsiahivana an’ireo mpikamban’ny governemanta, fa miandry vokatra mafonja avy amin’ny fitondrana ankehitriny vahoaka. Namariparitany mazava tsara an’ireo tanjona rehetra tsy maintsy hotratrarina.
Anisan’izany ny fitadiavana tombotsoa iombonana ho an’ny vahoaka Malagasy ary hiantoka izay mahasoa ny fiainan’izy ireo. Nosoritan’ny Filoha Andry Rajoelina tao anatin’ity taratasy nataony ity fa raharaha maika sy apetraka ho laharam-pahamehana ho an’ny fitondram-panjakana ny mamadika ho asa azo tsapain-tanana an’ireo vina mba hositrahin’ny vahoaka iray manontolo. Takian’ny Filoha Andry Rajoelina ny hanatanterahana izany ato anatin’ny fotoana fohy sy faran’izay haingana, ary hohatsaraina ireo tetikasa miaraka amin’ireo lamina efa napetraka hatrany am-boalohany mba hipaka mivantana amin’ny fiainam-bahoaka. Miainga amin’ny fanovana ny fisainana hoenti-miasa ary fanovana ny fomba fitantanana. Hentitra, araka izany ny Filoha raha nilaza fa mila atsahatra ireo fahazaran-dratsy sy ny kolontsaina tsy nahazoam-bokatra. Voakasika ao anatin’izany avokoa na ireo mpiasa tsotra na ireo mpiasam-panjakana isan’ambaratongany.
Hatrany am-boalohany dia efa hita taratra fa haingam-piasa ity fitondrana ity. Nanamarika izany ny fandraisana fepetra tao anatin’ny fotoana fohy sy ireo asa efa hita mivaingana sahady tao anatin’izay enim-bolana voalohany nitantanan’ny Filoha Andry Rajoelina izay. Nohamafisin’ny Filoha tamin’ireo mpikamban’ny governemanta fa mila tohizana hatrany izay fomba fiasa izay satria mila mandeha lavitra i Madagasikara. Betsaka ireo tetikasa mbola mila tanterahina izay notanisainy tato anatin’ity taratasy ity. Anisany ny fanatrarana ny fahaleovan-tena ara-tsakafo, ny fanatrarana ny fanamarinana taratasin-tany miisa roa tapitrisa hatramin’ny taona 2022, ny fanamboarana ireo lalàna any ambanivohitra, ny fanohanana ny vokatra haondrana mankany ivelany, fanatsarana ny sosialim-bahoaka. Fanamby lehibe nataon’ny Filoha Andry Rajoelina ny hanova ny fiainan’ny isa-tokantrano, ary ny hanamora ny ahazoan’ireo tantsaha famatsiam-bola.